मतदाता शिक्षा - गजु Real - साप्ताहिक
चुनाव आइसकेको छ, पार्टीहरू अहिलेसम्म आफ्नो प्रशंसा र विपक्षको बदख्वाइँमा अल्झिरहेका छन् । को असल छ, को खराब छ जनताले जानिसकेका छन् । भोट कसलाई हाल्ने भन्ने कुरा पनि लगभग निर्णय गरिसकेका छन् । तर भोट कसरी हाल्ने, आफ्नो भोट कतै बिग्रन त बिंग्रिदैन भन्ने कुरामा चाहिं जनता सचेत छन् कि छैनन् कुन्नि ?
पार्टीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । क–कसले आफूलाई भोट हाल्छन् भन्ने आँकलन त भैसक्यो होला, तर त्यो भोट सदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान कम गएको छ । किनभने उम्मेदवार र तिनका प्रचारकले मतदातालाई मतदाता शिक्षाभन्दा पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीको निन्दा शिक्षा दिइरहेको गजुरीयल ठम्याइ छ ।
हो, उम्मेदवारहरूले भोट त मागे, तर भोट कसरी हाल्ने भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । घरदैलो भन्यो गीत गायो, नाच्यो, भाषण ठोक्यो । अर्कालाई गाली बर्सायो, आफ्नो प्रशंसा गर्‍यो अनि फर्कियो । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यही देखिन्छ । कसरी छाप लगाउने भन्ने कुरातिर उनीहरूको ध्यान गयो कि गएन भनेर सोच्दा ध्यान गएको देखिँदैन ।
गजुरीयल विश्लेषक भन्छ, मतदाता शिक्षा आज र भोलिको प्रमुख दायित्व हो । प्रिय उम्मेदवारहरू † अब भोट हाल्न आउनेले कसरी सजिलोसँग भोट हाल्न सक्छन् वा पाउँछन् भन्नेतिर आफूलाई केन्द्रित गर्नुहोला । कसै–कसैले त्रास फैलाएका छन् । मतदातालाई त्यस्तो त्रासबाट मुक्त बनाउने प्रयास गर्नुहोला । अबको दुई दिन आफ्नो बढाइचढाइ र विरोधीको बदख्वाइँ होइन, मतदाताको आत्मविश्वास जगाउन समय खर्चनुहोस् ।
मतपत्रमा कसरी सहि तरिकाले छाप लगाउने ? सबै मतदातालाई यथेष्ठ जानकारी भएन भने धेरै मत बदर हुने सम्भावना छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू अलमलिन सक्छन्, कनिष्ठ मतदाताहरू झुक्किन सक्छन् । त्यसैले अबको यो दुई दिन यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने गजुरियल ठम्याइ छ । यसपालिको मतपत्र देख्नुभएको छ ? आम्मामा, यति धेरै चुनाव चिन्ह छन् कि हजुरबाहरू पनि अलमलिनुहुन्छ । हजुरबाहरू अर्थात् धेरै पटक भोट दिनेहरू । पर्सि भोट हाल्ने दिन । मतदातालाई सचेत गराउनु गजुरियल दायित्व हो । आउनुहोस्, आज यही विषयमा विश्लेषण गरौं ।
मतपत्रमा धेरै चुनाव चिन्ह छन् । तिनीहरू लहरै ठाडो लाइनमा हुन्छन् । प्रत्येक ठाडो लाइनबाट एक–एक चिन्हमा छाप लगाउने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा नहुन सक्छ । पहिलो ठाडो लाइनको एउटा चिन्हमा अध्यक्षलाई, दोस्रो ठाडो लाइनबाट एउटा चिन्हमा उपाध्यक्षलाई, तेस्रो ठाडो लाइनबाट वडाध्यक्षलाई छाप लगाउनुपर्ने जानकारी भोट माग्न आउनेहरूले दिए कि दिएनन् कुन्नि ?
त्यसपछिका प्रत्येक ठाडो लाइनबाट एक–एक चिन्हमा महिला र दलितलगायत चार जनालाई छाप लगाउनुपर्ने कुरा चुनाव प्रचारकहरूले बताए कि बताएनन् कुन्नि ? अहिलेको प्रचारशैली हेर्दा आफ्ना विपक्षीलाई कमजोर देखाउने र आफ्नो आत्मप्रचार मात्र गरिएको देखिन्छ । मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ, सहीबिनाको मतपत्र बदर हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बताए कि बताएनन् कुन्नि?
उनीहरूले वैशाख ३१ गतेअघि नै आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लिनुपर्छ भनेर सिकाए कि सिकाएनन् कुन्नि ? त्यो मतदाता परिचयपत्रबिना भोट हाल्न पाइँदैन भन्ने कुरा बुझाए कि बुझाएनन् कुन्नि ? ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र असक्तहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाए कि बुझाएनन् कुन्नि ? छैनन् भने मतदाता स्वयं सचेत हुनुपर्ने गजुरियल अनुरोध छ ।
गठबन्धनबाट सिक्ने कुरा मंसिर २१, २०७४
डेट एक्सपायर घोषणापत्र कार्तिक २५, २०७४
टिकट नपाउनेहरूका नाममा... कार्तिक १२, २०७४